Labada Aqal Oo Ansixiyey Heshiiskii Laga Gaaray Doorashada Somaliya. – Heemaal News Network
Labada aqal ee Baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey heshiiska siyaasadeed ee doorashada oo ay 17-dii bishan ku gaareen magaalada Muqdisho dawladda Federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
252 Xildhibaan ayaa u ansixiyey heshiiska waxaa diiday 2 mudane iyadoo 1 xildhibaan uu ka amausay sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan.
Ansixinta ka hor xildhibaanada labada aqal ayaa yeeshay dood ku saabsan heshiiskan, iyadoo xildhibaanada badankood ay taageerayeen in la meel mariyo inkastoo ay jireen xildhibaano diidanaa ama ku baaqayey in wax laga bedelo.
7-kii bishan Sibteembar ayey aheyd markii madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay kala saxiixdeen heshiiskaasi.
Waxa ay madaxdu ku heshiiyeen in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo, iyadoo qodob ka mid ah qodobada lagu heshiiyay ayaa dhigayay in heshiiska la horgeeyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, sidaas daraadeedna maanta ayet xildhibaannadu ka doodi doonaan heshiiskaasi islamarkaana ay cod u qaadaan.
Faysal Cali Waraabe Oo Duray Raysal Wasaaraha Cusub Ee Somaliya.